blackjack waa mid ka mid ah kulan card ugu caansan ee casinos - dhul ku salaysan, online iyo mobile. Waxaad ka ciyaari kara blackjack lacag dhabta ah ee mFortune Mobile Casino. The game has simple rules that are easy to learn, laakiin waxay u baahan tahay xirfad si ay si guul leh u ciyaaro. Taas ayaa ka dhigaysa blackjack caan la hiwaayadda, sidoo kale ciyaaryahan xirfadle.
Play blackjack at Our Casino talinayo
Sida loo Play blackjack
Waxaad ka ciyaari kara blackjack at mFortune Casino madadaalo ama lacag dhabta. Waxaad u dhigi karto khamaar for yar sida 10p.
Ujeedada ciyaarta of blackjack waa in gacan loo gaaro u dhaw 21 badan ganacsaduhu, oo aan u gudbaan (isku dhaceen). Marka aad yeellay khamaar aad, waxaa laguu qaban doonaa laba kaararka wajihi ilaa iyo ganacsadaha hoos baa loo soo qaban doono mid ka mid ah kaarka ilaa wajiga iyo mid card wejigaaga. Ciyaaryahanka ayaa haatan u baahan doontaa inaad go'aan ka sida loo ciyaaro gacanta. Waxaad istaagi kara inay joojiyaan jeedo; ka dhacay si ay u helaan mid dheeraad ah kaarka; laab hoos ku qoran laba kaar oo marka hore in ay laba aad bet iyo inay helaan hal kaadh in ka badan; gacantaada kala jabeen laba qaybood oo kala duwan khamaar ah haddii aad leedahay laba kaararka isku in aad laba kaararka koowaad ama caymiska qaado haddii kor-card dealer ee waa Ace ah.
Kaararka oo dhan waxay leeyihiin qiimo iyo qiimaha waxyaalahan waxaa loo wada daray in ay ku keento qiimaha guud ee gacantaada. Kaararka laba dhex toban leeyihiin qiimaha wejiga; Kaararka wejiga leeyihiin qiimo ah toban iyo ACES leeyihiin qiimo ah hal ama kow iyo toban, ku xiran tahay qiimaha inta kale ee gacantaada. goolasha Gacanta ugu sarreeya waxaa loo yaqaan blackjack oo tanuna waa gacantii labo kaar oo ka kooban Ace ah iyo kaarka qiimeeyo 10.
Marka aad jeedo, ayaa ku dhamaaday (waxaad tagi isku dhaceen ama aad ku taagan tahay), dealer ka ciyaara inuu gacanta iyo gacmaha waxaa la barbar aad la soo shubayaa for guul kasta oo.